ရိုဟင်ဂျာ Archives - Page4of4-
Home ရိုဟင်ဂျာ (page 4)
တရုတ်ကြီးအားကိုးဖြင့် ဂျီနိုဆိုဒ် ကျူးလွန်သူတို့၏ လုပ်ရပ်များ
By Aung Aung
in : ရိုဟင်ဂျာ
Comments Off on တရုတ်ကြီးအားကိုးဖြင့် ဂျီနိုဆိုဒ် ကျူးလွန်သူတို့၏ လုပ်ရပ်များ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးအပါဆုံး၊ အရှုပ်ထွေးဆုံး၊ ရှင်းရအခက်ဆုံး၊ အက္ခရာအကျဆုံးပြဿနာမှာ ရခိုင်အရေးဖြစ်သည်ကို လူတိုင်းသိပြီး ဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်။ ရခိုင်အရေးဟူသည် ရိုဟင်ဂျာတို့အား တရုတ်အားကိုးဖြင့် ဂျီနိုဆိုဒ် ကျူးလွန်နေခြင်းသာဖြစ်ပြီး တရုတ်ကြီး၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် “အမျိုးဘာသာသာသနာ”၏ ဂုဏ်သိက္ခာ အလုံးစုံကို နင်းခြေဖျက်ဆီးနေသော လုပ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ “ရခိုင်အရေး” တွင် အမြတ်အစွန်း အများဆုံးရသူများမှာ တရုတ်ကြီး၊ အာဏာရူး စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် အနောက်သား ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ရခိုင် အများစုက “အီးချမ်းပါဇီ၊ ရက္ခမြီ” သီချင်းဆိုနေကြသော်လည်း အဆိုပါ ဂျီနိုဆိုဒ် ကျူးလွန်နေသော အုပ်စုများမှာ ရခိုင်ပြည်၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးသည် သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်ကြောင်း တရားသေ မှတ်ယူထားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဝီရသူနှင့် သီတဂူတို့ကိုပါ အသုံးချပြီး ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်များကို ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားအားလုံး၏ တံတွေးခွက်ထဲ မျောနေအောင် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ဂျီနိုဆိုဒ် ကျူးလွန်နေသူတို့၏ …
ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံရေးရာဌာန အကြီးအကဲ ရောက်လာခြင်းအား ဂျီနိုဆိုက် အစီစဉ်ဖြင့် ကြိုဆို
Comments Off on ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံရေးရာဌာန အကြီးအကဲ ရောက်လာခြင်းအား ဂျီနိုဆိုက် အစီစဉ်ဖြင့် ကြိုဆို
ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံ​ရေးရာဌာနအကြီးအကဲ မစ္စတာဂျက်​ဖရီဖဲလ်​မန်​ ဦး​ဆောင်​​သောကိုစားလှယ်​အဖွဲ့သည်​ ၂၀၁၇ ခုနှစ်​ ​အောက်​တိုဘာ ၁၇ ရက်​​နေ့ နံနက်​ ၈ နာရီအချိန်​တွင်​ မြန်​မာ့​လေ​ကြောင်းလိုင်းဖြင့်​ စစ်​​တွေမြို့သို့ ​ရောက်​ရှိခဲ့ပြီး ရခိုင်​ပြည်​နယ်​အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်​နယ်​ဝန်​ကြီးချုပ်​နှင့်​ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်​ဝန်​ကြီးများအား နံနက်​ ၉ နာရီအချိန်​တွင်​ ဝန်​ကြီးချုပ်​ ဧည့်​ခန်းမ​ဆောင်​၌ လာ​ရောက်​​တွေဆုံခဲ့ကြသည်။ အာနန်ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာထွက်လာချိန်နှင့် အချိန်ကိုက် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်အကြမ်းဖက်မှု ဖန်တီးပြီး ရိုဟင်ဂျာတို့အား လူမဆန်စွာ မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့သလို ယခု ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံ​ရေးရာဌာနအကြီးအကဲရောက်လာချိန်တွင်လည်း ဂျီနိုဆိုက် အစီစဉ်တစ်ခု စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဂျီနိုဆိုက်လုပ်ငန်းစဉ်အရ ရခိုင်ပြည်နယ် ဒစကမှူး ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်း ဌာနမှူး နယ်စပ်ရေးရာအရာရှိများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ စစ်တွေမြို့နယ် မန်စီအစည်းအဝေးခန်းမသို့ ရိုဟင်ဂျာ ငါးဖမ်းစက်လှေပိုင်ရှင်အားလုံးကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ မွန်းတည်း ၁၂ …
အာနန်ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်
Comments Off on အာနန်ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်
၅.၁၀.၂၀၁၇ နေ့မှစ၍ အာနန်ကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကော်မတီက မင်းပြား၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်နှင့် ပေါက်တောမြို့နယ်တို့တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့အား လူမျိုးအမည် “မွတ်စလင်” ဖြင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းများထုတ်ပေးလျက် အာနန်အစီရင်ခံစာကို အကောင်အထည်ဖော်နေပြီဟု သိရသည်။ အာနန်ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်မှသည် အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာထွက်လာသည်အထိ မည်သည့် ရိုဟင်ဂျာကမျှ အဆိုပါကော်မရှင်နှင့် ထိုကော်မရှင်၏အစီရင်ခံစာကို ပြစ်တင်ကန့်ကွက်ခဲ့သည်ဟူ၍မရှိ။ ရိုဟင်ဂျာ အားလုံးနီးပါးက အကျဉ်းစခန်းမှ လွတ်မြောက်ရေးကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်စေလိုသဖြင့် အာနန်ကော်မရှင်တွင် ရိုဟင်ဂျာကို ကိုယ်စားပြုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်မပါသည့်တိုင် ၎င်း၏အစီရင်ခံစာကို အကောင်အထည်ဖော်စေလိုကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့သည် ၁၉၉၀မှစ၍ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစသည်တို့ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ် ခံရပြီး အကျဉ်းစခန်းပမာ ပိတ်လှောင်ထားခံနေရသည်။ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်းများစွာလည်း အာနန်ကော်မရှင်၏အစီရင်ခံစာအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတော်အစိုးရက အာနန်ကော်မရှင်၏အကြံပြု ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် ကော်မတီအမည်ဖြင့် ရိုဟင်ဂျာမျိုးတုံးသုတ်သင်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အာနန်ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းသည့် …
ရဲအုပ် ဦးတင်ရွှေအား ဂုတ်သွေးစုပ်ရန် လွှတ်ထားခြင်းလား မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရေး စီမံကိန်းလား
Comments Off on ရဲအုပ် ဦးတင်ရွှေအား ဂုတ်သွေးစုပ်ရန် လွှတ်ထားခြင်းလား မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရေး စီမံကိန်းလား
မင်းပြားမြို့နယ် သံရှင်ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်ဦးတင်ရွှေက တန်းစိတ်၊ စင်္ကြာ၊ လက်တော်ရီ၊ ဟာပိုင်၊ အောင်တိုင်၊ နော်နော်၊ စန်းဘလီ စသည့်ရွာများတွင် အကျဉ်းစခန်းပမာ နေရသည့် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ဂုတ်သွေးစုပ်နေသည်မှာ ၄-နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ကြောင်း အောင်တိုင်နေ ဦးလာလ်မီယာက ၂၁.၆.၂၀၁၇ နေ့တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ မင်းပြားမြို့နယ် တန်းစိတ်နေ ဦးမောင်တင်မောင်က “ရဲအုပ် ဦးတင်ရွှေရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုက ကမ်းကုန်နေပြီ၊ ကျွန်တော်တို့က မြို့နယ်မှူး၊ စစ်တွေရဲမှူးအထိ တိုင်ကြားသော်လည်း ရဲအုပ်ဦးတင်ရွှေက သူတို့ကိုလည်း ဆပ်ကြေးပေးသည့်အတွက် အရေးမယူတဲ့အပြင် ဒု-ရဲအုပ်မှ ရဲအုပ်အဆင့်သို့ပင် ရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်။” ဆက်လက်၍ ဦးတင်မောင်က “ဦးတင်ရွှေပေးတဲ့ ဒုက္ခက မျိုးစုံဘဲ။ လာချင်တဲ့အချိန်ရွာထဲရောက်လာပြီး သူလိုချင်တာ သူသိမ်းသွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးကိုပါ စော်ကားပြီး အော်ဟစ်ခြိမ်းခြောက်တယ်၊ လူတိုင်းက သူ့ကိုကြောက်ရတယ်၊ အဆိုးဆုံးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂုတ်သွေးစုပ်နေတာပဲ။ ၂၀၁၂ကစပြီး ကျွန်တော်တို့က အကျဉ်းစခန်းလို နေရတယ်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ …
As we need to plant the seeds of love, metta, in our hearts to attain moral perfection in our multicultural country, Myanmar. I have been reporting persecution of minorities particularly about Rohingya, end persecution and discrimination based on race and religion, buildapeaceful and prosperous country.
ရိုဟင်ဂျာတွေ ဂျီနိုဆိုဒ် လုပ်ခံရကြောင်း ဦးရဲထွဋ် အတည်ပြု ပြောကြား
သမ္မတနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ အပြောင်းအလဲက နိုင်ငံရေး ကျားကုန် ကစားကွက်လား
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဂျီနိုဆိုဒ် လုပ်နေကြောင်း ဝန်ခံလိုက်ပြီ
Pakistan and Bangladesh : Responsible to disclose the Rohingya Genocide
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA သည် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်
ရိုဟင်ဂျာ ဂျီနိုဆိုဒ်နှင့် ရခိုင့်တပ်မတော်
Suu Kyi’s Neo-Nazi Training Center in the name of “Central Institute of Civil Service”
Rohingya: Justice can bring peace and stability on Earth
© 2016 Aungaungsittwe. All Rights Reserved.